उद्यमशीलता सफलता को लागी जवाफ दिन १० प्रश्न - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B10B बजार समाचार
सम्पादकको पिक मार्च 24, 2021 मार्च 22, 2021 रोबर्ट मोमेन्ट अरबी फ्रीलान्स, B2B, शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ फ्रिल्यान्स वेबसाइटहरू, ब्लग, व्यापार, चीनियाँ स्वतन्त्रता, सम्पादकको पिक, FGG कम लागत बजार, फ्रीलान्स ग्लोबल गिग (FGG) कम लागत बजार, फ्रेन्च फ्रीलान्स गिग, ग्लोबल थोक अनलाइन, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, इन्डोनेसिया फ्रीलान्स गिग्स, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, पोर्तुगाली फ्रीलान्स गिग्स, रसियन फ्रीलान्स गिग्स, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, स्पेनिश फ्रीलान्स गिग, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
तपाई किन उद्यमी हुन चाहानुहुन्छ? तपाईंको किन ईन्धन बन्न गइरहेको छ जुन तपाईंलाई दिनहुँ प्रेरित गर्दछ।
जब तपाइँ तपाइँको उद्यमशीलता यात्रा सुरु गर्नुहुन्छ, तपाइँ धेरै काम गर्नुहुनेछ।
तपाइँ तपाइँको व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति र महिनाको स्थायी कर्मचारी हुनुहुन्छ।
एक उद्यमी बन्ने मुटुको बेहोशको लागि छैन। आफ्नै व्यवसाय सुरू गर्नु र चलाउनु भनेको तपाईले त्याग गर्नुपर्नेछ, लामो घण्टा काम गर्नुपर्नेछ, र तपाईको तनावको हिस्सासँग डील गर्नु पर्छ।
उद्यमशीलताको यो ग्लैमलाइजेशनले सबैलाई उद्यमी हुन चाहेको जस्तो देखिन्छ। यदि यो प्रत्येक महिलाको लागि पूर्ण र एकमात्र क्यारियर छनौट हो भने। त्यो सत्य होइन।
तपाईं सफल हुन उद्यमी हुनु आवश्यक छैन। धेरै परम्परागत क्यारियर इनामदायी र पूरा हुन सक्छ, त्यसैले यदि उद्यमी जीवन तपाईंको लागि छैन भने - त्यो ठीक हो
जहाँसम्म, यदि तपाई उद्यमिताको पछि लाग्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने, तपाईले पहिला आफैलाई केहि प्रश्न सोध्नु पर्छ। आत्म-परीक्षणले तपाईंलाई यो पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ यदि यो वास्तवमै तपाईंको लागि हो भने, र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईंले सफल हुन के गर्नुपर्छ।
निम्न १० प्रश्नहरूले तपाईंलाई तपाईंको ठूलो उद्देश्य, तपाईंको सामर्थ्य, कमजोरीहरू, र तपाईं शीर्ष कार्यमा बाहिर आउन थप काममा राख्नुपर्दछ जहाँ पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसोभए, यदि तपाइँ उद्यमी बन्ने सपनाको पछि लाग्न तयार हुनुहुन्छ भने, तल १० प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्।
जब तपाईं व्यापार बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ समय आउँदछ जब तपाईं सुत्न चाहानुहुन्छ, साथीहरूसँगै ह्या hang्गआउट गर्न, वा नेटफ्लिक्स बेन्जी-वाच हेर्न चाहानुहुन्छ, तर तपाईं त्यसो गर्न सक्नुहुन्न किनकि तपाईंले आफ्नो व्यवसायमा काम गर्नु आवश्यक छ। तपाईं सीईओ, लेखाकार, मार्केटिंग निर्देशक, ग्राहक सेवा प्रबन्धक, र शिपिंग समन्वयक हुनुहुन्छ। तपाईंले धेरै हाट लगाउनुहुन्छ तपाईंको व्यवसाय बढ्ने कोशिश गर्दा। तपाईंको किन तपाईंलाई ईन्धन दिईन्छ र तपाईंलाई अघि बढ्न प्रेरित गर्दछ। निम्न प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् र क्रिस्टल खाली हुनुहोस्। यसलाई लेख्नुहोस्। जब तपाईंलाई प्रेरणामा बढावाको आवश्यक पर्दछ, तपाईंको उत्तर पुनः पढ्नुहोस्।
१. तपाई किन उद्यमी हुन चाहानुहुन्छ? तपाईंको किन ईन्धन बन्न गइरहेको छ जुन तपाईंलाई दिनहुँ प्रेरित गर्दछ।
आत्म-प्रभावकारिता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ जब तपाईं एक उद्यमी हुनुहुन्छ। शुरू गर्दा, तपाईंसँग मालिक वा सहकर्मीहरू हुनेछन तपाईंलाई पम्प गर्दै, तपाईंलाई प्रोत्साहित गर्दै, र तपाईंलाई सक्षम छन् भन्दै। तपाई आफैले यो गर्नु पर्छ। के तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ तपाइँसँग जुन यो एक उद्यमी हुन लिन्छ? तपाईं सफल हुन आफ्नो क्षमता मा विश्वास गर्नै पर्छ। यदि यो अभाव हो भने, तपाईं यसमा जर्नलिंग, पुष्टि, र बढाउँदै आत्म जागरूकता र सकारात्मक सोच मार्फत काम गर्न सक्नुहुन्छ।
२. उद्यमी बन्नेमा तपाईको आत्म-विश्वास के हो?
जब तपाइँ तपाइँको उद्यमशीलता यात्रा सुरु गर्नुहुन्छ, तपाइँ धेरै काम गर्नुहुनेछ। सायद तपाईसँग पूर्ण-समय काम रहेको छ र बेलुका यो मा काम गर्दै हुनुहुन्छ, वा हुनसक्छ तपाई व्यस्त आमा हुनुहुन्छ साना बच्चाहरु संग तपाइँको ध्यान माग्दै। तपाइँ आफ्नो समय कसरी प्रबन्ध गर्नुहुन्छ भन्नेमा राम्रो नियाल्नुहोस्। के यो तपाईको समयको उत्तम प्रयोग हो? यदि तपाइँ सोशल मिडियामा घण्टा खर्च गर्नुहुन्छ वा सजिलै विचलित हुन्छ भने, एजेन्डा प्रयोग गर्नुहोस्, र तपाइँको दिनको तालिका बनाउनुहोस्। जब तपाइँको समय पहिले नै आबंटित हुन्छ, तपाइँ लिनेन कपाटको आयोजन सुरु गर्न कम सम्भावना हुन्छ जब तपाइँ तपाइँको वेबसाइटमा काम गरिरहनुपर्दछ।
I. के म मेरो समय प्रभावी ढंगले प्रबन्ध गर्छु?
सेल्फ-मैनेजमेन्टमा समान, तपाइँले तपाइँको सबै दैनिक बानीहरूको आत्म-आकलन गर्न आवश्यक छ। सफल व्यक्तिहरूको बानीहरू च्यानल गर्नाले तपाईंलाई अधिक सफल बनाउँदछ। सायद यो दैनिक ध्यान, कृतज्ञता वा हरेक पटक hours घण्टा निद्रा पाइरहेको छ।
Your. तपाईको दैनिक सफलताको बानी के हुनेछ?
एक उद्यमीको रूपमा, तपाईं निरन्तर सिक्ने र बढ्दै हुनुहुन्छ। जहाँसम्म, यदि तपाईं सँग एक विकास मानसिकता छैन, तपाईं आफैलाई स्टन्ट गर्दै छन् र सफलता बाधा अवरोध राख्नुहुन्छ। बृद्धि मानसिकतालाई प्रोत्साहित गर्नु उद्यमीहरूका लागि एक सफल सफलता रणनीति हो।
Do. के म विश्वास गर्दछु कि म नयाँ सीपहरू सिक्न सक्छु र म आफैंको उत्कृष्ट संस्करण बन्न सक्छु?
जब तपाइँ एक उद्यमी हुनुहुन्छ, तपाइँ पिभोट हुन आवश्यक छ र सफल हुन लचिलो रहन आवश्यक छ। नयाँ अवसरहरूको लागि खुला हुनुहोस् र आफ्नो व्यापार योजनामा ​​लचिलो रहनुहोस् जबकि लगातार रहनुभयो। यसको मतलब तपाईले पाठ्यक्रम निरन्तर परिवर्तन गर्नुपर्दैन भनेको होइन, तर यदि केहि काम गरिरहेको छैन भने जबरजस्ती नगर्नुहोस्। लचिलो रहनुहोस् र ग्राहक प्रतिक्रिया तपाईं मार्गदर्शन।
जेफ्री बेजोस (जनवरी १२, १ 12 1964) एक अमेरिकी प्रविधि उद्यमी, लगानीकर्ता, र समाजसेवी हुन्। उहाँ संस्थापक, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, र Amazon.com, Inc. को अध्यक्ष हुनुहुन्छ।
Something. के तपाईले पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न सजिलो पाउनुभयो जब केहि योजनाको रूपमा कार्य नगरीएको छ?
उद्यमी सफलताको लागि मापन योग्य लक्ष्यहरू सेट गर्नु आवश्यक छ। यदि तपाईंसँग लक्षित छैन भने, तपाईंतर्फ काम गर्न केहि छैन। के तपाईं चाहानुभएको ग्राहकहरूको संख्या छ वा पैसा बनाउन चाहानुहुन्छ? यिनीहरू लेख्नुहोस् र तिनीहरूलाई ट्र्याकमा छ कि छैन भनेर हेर्न बारम्बार प्राप्त गर्नुहोस्।
Your. तपाइँको त्रैमासिक र वार्षिक व्यापार लक्ष्यहरू के हुन्?
स्वयं लगानी र आत्म-देखभाल
तपाइँ तपाइँको व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति र महिनाको स्थायी कर्मचारी हुनुहुन्छ। तपाईको प्रयास अधिकतम बनाउन तपाईले आफ्नो ज्ञान, कौशल, मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा लगानी गर्नु पर्छ। पाठ्यक्रम लिदै, कोच वा जिमको साथ साईन अप गर्दा दश गुणा तिर्नेछ।
You. के तपाईं आफ्नो सीप सिक्न र विकासमा लगानी गर्नुहुन्छ? तपाईं आफ्नो मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य मा ध्यान केन्द्रित समय खर्च गर्नुहुन्छ?
प्रत्येक उद्यमीले कठिनाईको आफ्नो हिस्सा सामना गर्दछ; सफलताको कुञ्जी लचिलोपन हो।
जब यी चुनौतिहरू आउँदछन्, र तपाईं "तल झट्टिनुहुन्छ"। तपाईंले आफैलाई फिर्ता लिनु पर्छ र जारी राख्नु पर्छ। यदि तपाईं पहिलो झटका पछि छोड्नुभयो भने, तपाईं कहिले पनि व्यवसायीको रूपमा सफल हुनुहुनेछैन।
When। जब म अवरोध र चुनौतीहरूको सामना गर्दछु, म निरन्तर रहन्छु वा हार दिन चाहन्छु?
लचिलोपनको साथ दृढता आउँछ। सबै सफल उद्यमीहरू उनीहरूको दृष्टिकोणमा कठोर छन्। तिनीहरू के चाहन्छन् भनेर तिनीहरू क्रिस्टल स्पष्ट हुन्छन्, र तिनीहरू तिनीहरूको सपनाको खोजीमा स्थिर रहन्छन्। सफल व्यवसायहरू एकै रातमा निर्माण हुँदैनन्। यसले प्राय: लामो प्रयासहरू लिन्छ। यदि तपाईं सजिलै आफैंमा हार मान्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई ढोकामा यी बानीहरू जाँच गर्न आवश्यक छ यदि तपाईं एक उद्यमीको रूपमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने।
१०. म जीवनमा के चाहन्छु भन्ने कुराको पछि लाग्न म दृढ छु?
म यी प्रश्नहरू र उत्तरहरू तल एउटा जर्नलमा लेख्न सिफारिश गर्दछु जुन तपाईले फेरि सन्दर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। नाखुश ग्राहक, उत्पादन-असफल, वा लामो काम घण्टा जस्ता उद्यमी धनुहरूसँग काम गर्ने बित्तिकै पछाडि फर्केर याद गर्नुहोस् कि तपाईं किन यसो गरिरहनु भएको छ र तपाईंले चुनौतिहरूलाई पार गर्न सफल हुनु आवश्यक छ।
सांप्रदायिक समाचार उद्यमी व्यवसायी उद्यमी महिला उद्यमीहरू लघु व्यापार एक व्यवसाय शुरू गर्दै सुरुवातमा स्टार्टअपहरू महिला उद्यमी
रोबर्ट मोमेन्ट एक अनुभवी र अत्यधिक कुशल आईसीएफ प्रमाणित भावनात्मक खुफिया कोच, प्रशिक्षक, पुस्तकको अध्यक्ष र लेखक, व्यवस्थापकहरूको लागि उच्च भावनात्मक खुफिया हो। रोबर्ट शिखर प्रदर्शन र सफलता को लागी उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्राप्त गर्न ब्यवस्थापकहरु, कार्यकारीहरु र कर्मचारीहरु को विकास मा विशेषज्ञ